यदि मानिसको हृदयमा परमेश्‍वरप्रति दुस्मनीमा छ भने, मानिसले कसरी परमेश्‍वरको भय मान्न र खराबीबाट अलग रहन सक्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आजका मानिसहरूसँग अय्यूबको जस्तै मानवता नभएको हुनाले, तिनीहरूको प्रकृति सार के हो, र परमेश्‍वरप्रति तिनीहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ? के तिनीहरू परमेश्‍वरसित डराउँछन्? के तिनीहरू खराबीबाट टाढा बस्छन्? जो परमेश्‍वरसँग डराउँदैनन् वा खराब कुराहरूबाट अलग बस्‍न सक्दैनन्, उनीहरूलाई तीनटा शब्दमा व्याख्या गर्न सकिन्छ: “परमेश्‍वरका शत्रुहरू।” तिमीहरूले प्रायजसो यी तीन शब्दहरू बोल्छौ, तर तिमीहरूलाई कहिल्यै पनि तिनको वास्तविक अर्थ थाहा हुँदैन। “परमेश्‍वरका शत्रु” भन्ने शब्दहरूको सार छ: यी शब्‍दहरूले मानिसलाई परमेश्‍वरले शत्रुको रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेर होइन, तर मानिसले परमेश्‍वरलाई शत्रुको रूपमा हेर्छ भनेर बताइरहेको हुन्छ। सर्वप्रथम, जब मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न थाल्छन्, तीमध्ये कुन चाहिँमा आफ्नै उद्देश्य, प्रेरणा र महत्वाकांक्षाहरू हुँदैन? तिनीहरूको एउटा भागले परमेश्‍वरको अस्तित्वमा विश्‍वास गर्ने र परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई देख्‍ने भए पनि, परमेश्‍वरमाथिको उनीहरूको विश्‍वासमा अझै ती अभिप्रायहरू हुन्छन्, र परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नुको तिनीहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको उहाँको आशिष्‌ र उनीहरूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्नु हो। मानिसहरूको जीवनका अनुभवहरूमा, भने मैले परमेश्‍वरका लागि आफ्नो परिवार र जागिर छोडेको छु, र उहाँले चाहिँ मलाई के दिनुभएको छ भनेर तिनीहरूले प्रायजसो आफैसँग विचार गर्ने गर्छन्? मैले यसमा थप्नुपर्छ, र यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ—के मैले हालसालै कुनै आशिष्‌ पाएको छु? यस समयमा मैले धेरै थोक दिएको छु, मैले धेरै दौडधूप गरेको छु, र मैले धेरै दुःख भोगेको छु—के त्यसको सट्टामा परमेश्‍वरले मलाई कुनै पनि प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ? के उहाँले मेरा असल कामहरू याद गर्नुभएको छ? मेरो अन्त्य कस्तो हुनेछ? के म परमेश्‍वरको आशिष् पाउन सक्छु? … प्रत्येक व्यक्तिले निरन्तर आफ्नो हृदयभित्र यस्तो हिसाब-किताब गर्दछ, र उनीहरूले आफ्‍ना अभिप्राय, महत्वाकांक्षा र लेनदेनले भरिएको मागहरू परमेश्‍वरसँग गर्छन्। भन्नुको अर्थ, मानिसले आफ्नो हृदयमा निरन्तर परमेश्‍वरको जाँच गरिरहेको हुन्छ, परमेश्‍वरबारे निरन्तर योजनाहरू बनाइरहेको हुन्छ, उसको आफ्नै व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि निरन्तर परमेश्‍वरसँग तर्क गर्दछ, अनि उसले चाहेको कुरा परमेश्‍वरले दिन सक्नुहुन्छ कि सक्‍नुहुन्न भनी हेर्न परमेश्‍वरबाट एउटा अभिव्यक्ति निकाल्ने कोसिस गर्दछ। यसको साथै, परमेश्‍वरको पछि लाग्दा पनि मानिसले परमेश्‍वरलाई परमेश्‍वरजस्तो व्यवहार गर्दैन। मानिसले जहिले पनि परमेश्‍वरसँग सौदाबाजी गर्ने कोसिस गरेको छ, निरन्तर उहाँसँग मागहरू गरिरहेको छ, र उसलाई औँलो दिँदा संसार निल्‍ने कोसिस गर्दै हरेक पाइलामा उहाँलाई दबाब दिइरहेको हुन्छ। मानिसले परमेश्‍वरसँग सौदाबाजी गर्नुका साथसाथै उहाँसँग तर्क पनि गर्दछ, अनि कति जना यस्ता मानिसहरू पनि हुन्छन्, जो आफूमाथि परीक्षाहरू आइलाग्दा वा उनीहरूले कुनै विशेष परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पर्दा कमजोर, निष्क्रिय र आफ्नो काममा सुस्त हुन्छन् अनि परमेश्‍वरको विषयमा गुनासोहरूले भरिएका हुन्छन्। मानिसले पहिलो पटक परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न थालेको समयदेखि नै उसले परमेश्‍वरलाई प्रशस्तताको स्रोत, हरेक समस्याको समाधान ठानेको छ र उसले आफूलाई परमेश्‍वरको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता ठानेको छ, मानौं परमेश्‍वरबाट आशिष्‌ र प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्न खोज्नु उसको जन्मजात अधिकार र कर्तव्य हो, र परमेश्‍वरको जिम्मेवारीचाहिँ मानिसको सुरक्षा र वास्ता गर्नु अनि उसको निम्ति उपलब्ध गर्नु हो। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेहरू सबैले “परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास” को आधारभूत बुझाइ यस्तै हुन्छ, र परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने भन्ने अवधारणाको बारेमा उनीहरूको गहिरो बुझाइ यस्तै हुन्छ। मानिसको स्वभाव सारदेखि उसको व्यक्तिपरक खोजसम्म, परमेश्‍वरको भयसँग सम्बन्धित कुनै कुरा छैन। मानिसले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने उद्देश्यसँग परमेश्‍वरको आराधना गर्नुको सम्भवतः कुनै सम्बन्ध छैन। भन्नुको अर्थ, परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्दा परमेश्‍वरको भय मान्नु र उहाँको आराधना गर्नु पनि आवश्यक छ भन्‍ने कुरा मानिसले कहिल्यै विचार गरेको छैन, न त बुझेको नै छ। यस्ता सर्तहरूको प्रकाशमा मानिसको सार स्पष्ट हुन्छ। यो सार के हो? यो यही हो कि मानिसको हृदय द्वेषपूर्ण छ, उसले मनमा धोखा र छल राख्छ, निष्पक्षता र धार्मिकता, साथै जे सकारात्मक छ त्यो मन पराउँदैन, र यो घृणित र लोभी छ। मानिसको हृदय परमेश्‍वरको निम्ति योभन्दा बढी बन्द हुन सक्दैन; उसले त्यो परमेश्‍वरलाई पटक्कै दिएको छैन। परमेश्‍वरले कहिल्यै मानिसको वास्तविक हृदय देख्नुभएको छैन, न त कहिल्यै मानिसद्वारा उहाँको आराधना नै भएको छ। परमेश्‍वरले जति नै ठूलो मोल तिर्नुभए पनि वा उहाँले जति धेरै काम गर्नुभए पनि, वा उहाँले मानिसका निम्ति जति धेरै उपलब्ध गराउनु भए पनि, मानिस अन्धो नै रहन्छ र ती सबैप्रति पूर्ण रूपमा उदासीन हुन्छ। मानिसले आफ्नो हृदय परमेश्‍वरलाई कहिल्यै दिएको छैन, उसले केवल आफ्नो हृदयलाई ध्यान दिन, र आफ्नै निर्णयहरू लिन चाहन्छ—जसको सार भनेको के हो भने, मानिसले परमेश्‍वरको भय मान्ने र खराबीबाट अलग रहने बाटो पछ्याउन वा परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता र प्रबन्धहरू पालन गर्न चाहँदैन, न त उसले परमेश्‍वरलाई परमेश्‍वरको रूपमा आराधना गर्न चाहन्छ। आज मानिसको अवस्था यस्तै छ। अब हामी फेरि अय्यूबलाई हेरौं। सबैभन्दा पहिला, के तिनले परमेश्‍वरसँग सम्झौता गरे? के तिनले परमेश्‍वरको भय मान्ने र खराबीबाट अलग बस्ने दृढ अडानको पछि तिनको कुनै अभिप्राय थियो? त्यस समय, के परमेश्‍वरले कसैसँग आउनेवाला अन्त्यको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो? त्यस बेला, परमेश्‍वरले कसैलाई पनि अन्त्यको बारेमा प्रतिज्ञा गर्नुभएन, र यही पृष्ठभूमिमा अय्यूबले परमेश्‍वरको भय माने र खराबीबाट अलग बस्न सके। के आजका मानिसहरू अय्यूबको दाँजोमा खडा हुन सक्छन्? त्यहाँ असमानता धेरै छ; तिनीहरू फरक समूहमा पर्छन्। अय्यूबसँग परमेश्‍वरको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान नभएको भए पनि, तिनले आफ्नो हृदय परमेश्‍वरलाई दिएका थिए र त्यो परमेश्‍वरको स्वामित्वमा थियो। तिनले परमेश्‍वरसँग कहिल्यै पनि कुनै सम्झौता गरेनन्, र तिनको कुनै उग्र चाहना थिएन वा तिनले परमेश्‍वरसित कुनै मागहरू राखेनन्; बरु, तिनले यो विश्‍वास गर्थे, “यहोवाले दिनुभयो र यहोवाले नै लानुभएको छ।” आफ्‍नो जीवनको धेरै वर्षको अवधिमा परमेश्‍वरको भय मानेर अनि खराबीबाट अलग रहेर तिनले यही देखेका र प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै गरी, तिनले पनि यी शब्दहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने नतिजाहरू प्राप्त गरेका थिए: “के हामीले परमेश्‍वरको हातबाट असल कुराचाहिँ ग्रहण गर्ने र खराबीचाहिँ ग्रहण नगर्ने?” यी दुई वाक्य ती कुराहरू थिए जुन तिनले आफ्नो जीवनका अनुभवहरूमा परमेश्‍वरप्रति आज्ञाकारी हुने आचरणको परिणामको रूपमा देखेका र थाहा पाएका थिए, र यिनै कुराहरू तिनका सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारहरू थिए जसद्वारा तिनले शैतानले गरेका परीक्षाहरूमा विजय पाएका थिए, र ती तिनी परमेश्‍वरको गवाहीमा दृढ भएर खडा हुने आधार थिए। यस स्थितिमा, के तिमीहरू अय्यूबलाई एक प्रेमिलो व्यक्तिको रूपमा कल्पना गर्छौ? के तिमीहरू त्यस्तो व्यक्ति बन्ने आशा गर्छौ? के तिमीहरू शैतानका परीक्षाहरूबाट गुज्रनुपर्छ कि भनी डराउँछौ? के तिमीहरू परमेश्‍वरसित तिमीहरू पनि अय्यूबको जस्तै परीक्षाहरूमा पर्न सकूँ भनी प्रार्थना गर्ने संकल्प गर्छौ? कुनै शङ्कै छैन, धेरैजसो मानिसहरूले यस्ता कुराहरूका लागि प्रार्थना गर्ने आँट गर्दैनन्। त्यसैले यो स्पष्ट छ कि तिमीहरूको विश्‍वास अति नै सानो छ; अय्यूबको तुलनामा तिमीहरूको विश्‍वास उल्लेख गर्नु पनि अयोग्य छ। तिमीहरू परमेश्‍वरका शत्रु हौ, तिमीहरू परमेश्‍वरसँग डराउँदैनौ, तिमीहरू परमेश्‍वरप्रतिको आफ्नो गवाहीमा अडिग हुन सक्दैनौ, र शैतानको आक्रमण, आरोप र परीक्षाहरूमाथि तिमीहरू विजयी हुन सक्दैनौ। कुन कुराले तिमीहरूलाई परमेश्‍वरका प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्न योग्य बनाउँछ? अय्यूबको कथा सुनेपछि र मानिसलाई बचाउने परमेश्‍वरको अभिप्राय र मानिसको मुक्तिको अर्थ बुझिसकेपछि, के तिमीहरूसँग अब अय्यूबले जस्तै परीक्षाहरू स्वीकार गर्ने विश्‍वास छ? के तैंले आफैलाई परमेश्‍वरको भय मान्ने र खराबीबाट अलग बस्ने बाटोमा लगाउने थोरै संकल्प गर्नुपर्दैन र?
अघिल्लो: परमेश्‍वर मानिसबाट लुक्नुभएको भए पनि, सबै थोकमा भएका उहाँका कामहरू नै उहाँलाई जान्नका निम्ति पर्याप्त छन्
अर्को: परमेश्‍वरका जाँचहरूको बारेमा कुनै शङ्का नगर
अय्यूबको साक्षीले पछिका पुस्ताहरूलाई दिएको चेताउनी र ज्ञान
परमेश्‍वरले कुनै मानिसलाई जुन प्रकारले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यस प्रक्रियालाई बुझ्नुका साथै, मानिसहरूले परमेश्‍वरले अय्यूबलाई...